Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubada cagta ee ugu caansan ee loo yaqaan Nickname; 'El Mimo'. Our Thierry Henry Childhood Story iyo wargeysyada aan la isku qorin Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Kaga bilow.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Sanadaha Hore
Henry wuxuu ku dhashay dhalashada 17 August 1977 ee Les Ulis, Essonne oo ah xaafad Paris ah oo uu aabaheed, Antoine Henry iyo hooyadiis, Maryse Henry.
Labada waalidba waxay ahaayeen muhaajiriin. Aabihiis, Antoine, wuxuu ka yimid Guadeloupe (jasiiradda La Désirade), hooyadiis, Maryse, waxay ka timid Martinique. Labaduba waxay u yimaadeen Faransiiska si ay noloshooda u wanaajiyaan.
Qoyska Henry ayaa ku noolaa aqal yar, xaaladaha nololeedna ma ahan kuwo taageersan, laakiin Antoine ayaa ku dhiirigeliyay Henry inuu ciyaaro isboorti, isla markaana wuxuu maalgashigiisa ku maalgeliyaa ciyaaraha fudud. Wuxuu Henry u qaaday kulamada kubadda cagta ee maxaliga ah. Thierry Henry ayaa dhawaan la wareegay caruur kale oo muhaajiriin ah oo degmadiisa ah iyada oo loo marayo ka qaybqaadashada joogtada ah iyo horumarinta ciyaaraha kubadda cagta.
Si dhaqso ah ayay u muuqatay in Henry uu ahaa hab ka fiican ciyaartoyda kubadda cagta ka fiican carruurta kale ee da'diisa ah. Wuxuu bilaabay inuu u ciyaaro kooxda yar yar ee Les Ulis iyo Palaiseau. Markii uu da'diisu ahayd 13, Henry wuxuu bilaabay inuu u ciyaaro kooxda Viry-Chatillon ee kooxda 15.
Awoodiisa waxa uu ahaa mid cajiib ah oo ku filan si uu ugu kasbado booska kooxda kubada cagta ee CO Les Ulis.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Kala saarida waalidka
Keliya waqtiga Thiery Henry Henry u baahnayd waalidkiis, nasiib daro ayaa dhacday. Labada waalidba way kala tageen. Waxay ahayd hooyadiis oo ku guuleysatey dadaalka lagu hayo xannaanaynta ayada oo ay ka dambeeyeen dagaallo badan oo haynta ilmaha.
Hooyadan ayaa isaga ka soo kaxeeysatay aabihiis iyo magaaladiisa kubadda cagta ee Orsay halkaas oo ay ku heshay Dugsiga Alexander Fleming School in ay diirada saaraan tacliinta. Markii uu ogaaday in uusan ahayn wacitaankiisa, Theiry Henry kadib markii uu soo baxay. Wuxuu bedelay kubadda cagta.
14, waxaa loo doortay Xiriirka Cagta Faransiiska ee Clairefontaine Academy.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Career
Henry wuxuu saxiixay qandaraas tababar ah oo uu la galay macalinka kooxda Monaco, Arsene Wenger. Wuxuu ciyaaray kubadiisii ​​ugu horeysay ee kubada cagta ee 1994 ee guuldarada 2-0 kulankii Nice. Waxaa loo saaray garabka bidix ee Wenger.
1996, Henry wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee Faransiiska sanadkaan isagoo tababare u ah Asene Wenger. Wuxuu hogaaminayay xulka Faransiiska ee Under-18 si uu ugu guuleysto Koobka Yurub wuxuuna dhaliyey goolal xNUMX tartanka
Isagoo ka hadlayay qaab ciyaareedkiisa quruxda badan ee tartamada kale, waxa uu qeyb ka ahaa xulkii France ee Koobka Adduunka ee 1998. Waxa uu sii waday inuu u ciyaaro Monaco oo uu ku riyaaqay qof walba qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah. Wuxuu goolal u dhaliyey 20 kulamada 105.
1999, Henry ayaa ka tagay Monaco wuxuuna noqday qeyb ka mid ah Serie A ee Juventus. Waxaa la siiyay lacag dhan 10.5 million pounds si uu ugu biiro kooxda. Isla sannadkaas, wuxuu goolkiisii ​​ugu horeeyay u dhaliyay kooxda, labo ka mid ah 3-1 ayaa laga badiyay hogaamiyeyaasha horyaalka Lazio.
Waqti yar ka dib, waxaa loo wareejiyay Arsenal lacag dhan £ 8million, waxaana ku jiray tababaraha qadka dhexe ee Arsene Wenger. Inta kale waxay dhahaan waa taariikh.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Nolosha Xiriirka Claire Merry
Thierry Henry ayaa la kulmay Claire Merry oo ah nooca Ingiriisiga ah iyadoo la duubay xayaysiinta Renault Clio ee 2001. Labaduba waxay kufsadeen jacaylkii ugu horreeyay. Bishii Luulyo 5th 2003, waxay guursadeen Iskuulka Highclere.
Waxay haysteen ilmahooda kowaad, shaah, May 27th 2005. Hadda waxay tahay qof weyn.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -8m Furiinka
Kubad sameeyaha Thierry Henry iyo farshaxanka sanadka ee Sadie Hewlett ayaa bilaabay inay wax ka qabtaan kadib markii ay ka wada shaqeynayeen sawir qaade. Sida muuqata Xaaskiisa Henry Claire Merry waxay ogaatay in ninkeeda uu khiyaaneeyo, oo lagu soo rogay heshiis xaas ah oo 8m ah oo ay ku socotay. Furitaanka xayawaankani waxa ay dhaceen kaddib markii Their Henry Henry loo wareejiyay FC Barcelona.
Sida laga soo xigtay Henry, "Furitaanku marnaba ma fududa, xitaa wax badan oo gabad ah oo dhexda ku jira". Ciyaaryahankii hore ee Arsenal ayaa sidoo kale ka hadlay sida uu u jecel yahay gabadhiisa "Tea" waxaana uu sheegay in aabihii inuu caawiyay inuu bedelo.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Helitaanka Jacaylka Mar labaad
Kadib markii uu is-furay, Thierry Henry mar kale wuxuu helay jacayl dhab ah. Wuxuu si dhaqso ah u galay dhaqaale cusub kaas oo maanta la sheegay in uu sii dheeraaday intii u dambeysay.
Thierry Henry wuxuu mar kale jacayl ka helay qaabka baaskiilka ee Andrea Rajacic. Waxay ku kulmeen 2008 waxaana lagu arkay dhowr fasax oo kala duwan iyo banaan baxyo.
Xaqiiqdii waxay sameeyaan lamaane cajiib ah waxayna u muuqdaan inay dhib ku yihiin Jannada. Mid waxa uu ka yaabi doonaa sababta ay labadaba uhogasheen weli ama haddii maadada ay waligood udhaxeyso. Waxaa la siiyay, maantana ma jirto baahi gaar ah oo loo geliyo giraan ku xiran iyo sababta ay u burburisay xiriir wanaagsan oo wanaagsan oo leh aroos? Dad badan oo caan ah ayaa weli ah kuwo aan is qabin oo si wadajir ah ugu faraxsanaa sanado badan.
Marka la eego in Thierry uu halkaa joogey isla markaana uu sameeyay, taasina waxay u muuqatay mid la fahmi karo inuusan dooneynin inuu mar kale sameeyo.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Cayaaryahanka Idol
NBA ayaa abaabulay wareysi gaar ah oo mid-mid-mid ah oo u dhaxeeya Henry Henry iyo halyeeyga kubadda kolayga Kobe Bryant, halka labada ciyaaryahan ay ka wada hadleen sanamyadooda kubada cagta.
Ciyaartoyda oo dhan la yaab leh ciyaartoyda ayaa xusay magaca xiddiga reer Holland iyo halyeeyga AC Milan, Marco van Basten, kaasoo loo arko mid ka mid ah ciyaartoyda ugu weyn ee waqtigiisa.
"Marco van Basten ayaa ahaa ciyaaryahankii aan jeclaa" ayuu yiri Henry. "Waxa uu yahay mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican taariikhda. Waxaan arkay isaga markaan ilmo ahaa iyo sida uu kubada u dhuftay ayaa ah mid cajiib ah. Waxaan isku dayey inaan ku daydo dhaqaaqiisa. "
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Hadafkiisa ugu xiisaha badan
Henry ayaa dhaliyey goolal rasmi ah xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay ee Arsenal. Xiddiga reer France ayaa goolal u dhaliyey kooxda Gunners, waxaana uu sii ahaanayaa gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda kooxda reer London ee 228.
Si kastaba ha ahaatee, goolkii uu jecel yahay ma uusan aheyn halka uu ku dhaliyey kubada dareenka ama kubad hareer mara ciyaartoy badan. Waxa ay aheyd mid ka mid ah gool uu ka dhaliyay Leeds United kulankiisii ​​ugu horeeyay ee uu ku soo laabto maaliyada Arsenal.
"Midkastaa wuxuu ahaa shakhsi. Taariikhda FA Cup-ka ma hoos iman doono, lakiin waa markii ugu horeysay ee aan gool dhaliyo. "Waad ogtahay, looma jeedo inaan soo laabto oo aan dib u soo laabto. Aan la micno aheyn inaan ciyaaro, waan ciyaaray. Aniga ma ahan inaan gool dhaliyo, gool ayaan dhaliyey. Waxay ahayd dareen ahaan. Ma aysan aheyn farsamo ama ku saabsan dhibcaha, waxay ahayd waxa ii macnaheedu yahay. "
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Ciyaaryahan uu jecelyahay Premier League
Midkani wuxuu si weyn uga farxin doonaa taageerayaasha Manchester United. Iyadoo si gaar ah ula socota Sky Sports, Henry ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee uu ka horyimid Premier League inuu ka mid yahay halyeeyga khadka dhexe ee United, Paul Scholes.
Henry ayaa sheegay in Scholes uusan weligiisba helin deyntii uu u qalmay, khadka dhexe ayaana muhiim u ah guushii Manchester United ee Ferguson xilli ciyaareedkii hore. Ciyaaryahankan Faransiiska ah ayaa intaas ku daray hadii uu ku qasbanaan lahaa inuu xulo koox, waxa uu ku laaban lahaa Scholes.
"Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican, haddii uusan aheyn kan ugu fiican, waan ciyaaray, waan sameyn karnaa." Haddii aan Paul Scholes kooxdeyda heysto, wax waliba waa uu ku dhowaan lahaa. Manchester United, waxay arkeen sidaan oo kale, lakiin waxaan qabaa in Paul Scholes uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican ee aan la ciyaaray horyaalkan, islamarkaana aan arkay meel walba. "
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Cunto Cunto
Inkastoo uu Arsene Wenger ku adkeysanayo diilinta ganaaxa ah, Henry ayaa ku riixi lahaa qaabkiisa qeybtii hore ee Jelly Babies ka hor inta uusan ciyaarin kulan kasta. Marwalba marba marka ka dib madaxa waa la jaraa.
Inkastoo ay adag tahay inuu taam ahaansho, tababaraha Faransiiska wuxuu jecel yahay inuu ku kaco digaag, digir, bariis iyo cunto karibiyaanka.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Hagihiisa
Thierry Henry ma uusan ku dhicin Arsenal sida caadiga ah. Heshiiska ayaa dhacay ka dib markii uu kulan dhex maray Wenger iyo Henry. Weeraryahankan ayaa sheegay in uu si kama 'ah u la kulmay Wenger oo ku duulay Paris si uu ugu biiro kooxda Arsenal.
Tababaraha Arsenal ayaa hoos u dhigay shaqada, Henry ayaana ahaa ciyaaryahan Arsenal ah bishii August 1999.
Ka dib markii uu u soo dhaqaaqay Juventus, Henry ayaa waqti adag ku riyaaqay kubada cagta Talyaaniga. Afar bilood oo uu ku soo qaatay tababare Arsene Wenger waxa uu kula kulmay Paris FC, waxaana uu u sheegay macalinkii hore ee Monaco inuu jeclaan lahaa inuu ku biiro Gunners. Markii Nicolas Anelka lagu iibiyay Real Madrid xagaagii 1999, Wenger ayaa xasuustay wadahadaladii oo uu kooxda reer Talyaani ku iibsaday £ 10m. Waxay si fiican u shaqeysay.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Ka Hor Cadaadiska
Halyeeyga, wareysi gaar ah oo la socda Afar Afar Laba, ayaa shaaca ka qaaday inuusan heysanin fara badan oo horay loo sameeyey, waxaana uu dhageysan doonaa kaliya heesaha sare ee rikoodhka heesaha ama Zouk muusikada si uu u helo booska ka hor ciyaarta. Qaar ka mid ah fannaaniinta uu jecel yahay waa Dr Dre, Snoop Dog, Xzibit, Wu-Tang Klan iyo Tupac.
Muusikada ayaa marwalba qeyb weyn ka ahayd qorshihii hore ee Henry, waxaana uu ku faraxsan yahay in tababarayaasha iyo tababarayaashu ay xor u yihiin isticmaalka maalmahan.
"Waxay u shaqeysaa si kala duwan aniga maxaa yeelay muusiggu mar walba noloshayda ayuu ku jiraa - wax kasta oo aan sameeyo. Markaan ku jiro gurigayga, gaariga, dibadda iyo ku saabsan. Muusikada ayaa dib iigu celisa meelo kala duwan. Haddii aan rabo inaan ku laabto markii aan yaraa oo aan arko inaan la ciyaarayo aabahay waan garanayaa muusikada dhegeysiga. Waan ogahay muusikada aan u ciyaaro si aan kubada ugu ciyaaro ciyaarta. "
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Song Song
Henry wuxuu mar walba carabka ku adkeeyay in muusiggu uu ahaa sidii uu u heli lahaa aagga. Laakiin gabaygii had iyo jeer ku jiray liiska ciyaaraha wuxuu ahaa Queen's 'Waxaan nahay Champions'. Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in uu had iyo jeer dhageysan doono heesaha oo uu yiraahdo 'Anigu ma ahan', laakiin markii uu France ku guuleystay Koobka Adduunka, wuxuu dhab ahaantii bilaabay inuu isku xiro heesaha.
"Marwalba waan xasuustaa aduunka oo dhan, dhageysanaaya heesahaan - waxay ku xiran yihiin aniga."
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Tatoo
Thierry Henry waa runtii nin la calaamadiyay oo sidoo kale loo yaqaan jacaylka jimicsiga. Wuxuu mar horay u soo bandhigay sawir buuxa oo qurux badan oo gacanta midig ah, isaga oo intaa ku daray in farshaxanka jirka ee horay loo yaqaan. Tattoo ayaa si farxad leh ugu ciyaara gacanta gacanta bidix ee gabadha lagu riixo oo u muuqata inuu yahay madow madow iyo silsilad dahab ah oo qoorta loo saaro.
Tattoo cusub wuxuu ku darsaday nambarka New York ee gacanta bidixda gacanta bidix.
Tattoo ee gacanta gacanta bidix ee Henry ayaa ka muuqda astaanta Liberty iyo waxa u muuqda in Brooklyn Bridge.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Fanaanka Waaweyn ee Kubadda Koleyga
Haddii aad aaminsan tahay in Henry uu ahaa taageere weyn oo kubadda cagta ah, waxaad qaldanayd. Weeraryahankan ayaa sababay sababo cad oo muuqaal ah, oo ah mid aad u jecel Spurs marka ay timaado kubada cagta, laakiin waa taageere weyn oo San Antonio Spurs ah marka ay timaado kubadda kolayga. Dhab ahaantii, waxaa lagu arkay dhacdooyinkii kufsiga ee loo yaqaan 'San Antonio Spurs' iyo 'jersey'.
Kobe Bryant oo ka tirsan LA Lakers (hadda waa fariistay) iyo Tony Parker oo ka tirsan San Antonio waa laba ciyaaryahan oo Henry u badanaa la soo baxo. Xiddiga Faransiiska ah ayaa xitaa booqday saaxiibkiisa Parker intii lagu jiray tababarkiisa.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Ku shaqeynta filimada
Henry wuxuu xiiseynayaa filimka kaliya kuma koobna inuu daawado shaashadda weyn. Ciyaaryahanka reer France ayaa sidoo kale ku soo biiray filin yar. Marka laga reebo Goal taxanaha filinka, xiddiga Faransiiska ayaa sidoo kale soo bandhigay ambabaxay, nooca filimka ee muuqaalka TV-ga caanka ah. Waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa qoraallada sida Garsooraha, Bedelka iyo 1: 1 Thierry Henry, dhamaantood waxay ku dhisan yihiin kubada cagta hal dhinac ama mid kale.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Wuxuu jecel yahay qoob-ka-ciyaarka
Henry wuxuu ku fiican yahay cagihiisa, ma ahan kaliya marka uu kubbada cagta joogo, lakiin dabaqa qoob ka ciyaarka sidoo kale. Ciyaaryahanku wuxuu inta badan soo bandhigay qaab ciyaareedkiisa garoonka kubadda cagta ee siyaabo kala duwan. Henry wuxuu gabi ahaanba ku habboon yahay Carribean stereotype wuxuuna gabi ahaanba jecel yahay qoob ka ciyaarka.
Xiddiga Faransiiska ah ee Lonely at the top, xiddiga reer France ayaa shaaca ka qaaday in ka dib Koobkii Adduunka ee 1998, isaga iyo ciyaartoyda Faransiisku ku qoslaan habeenkii iyagoo ku dhajiyay qoob ka ciyaara qoob ka ciyaarka Koobka Aduunka intii uu udhaliyay qoob ka ciyaarka Ruushka talaabooyinka.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -Heerkiisa
Arsenal Football Club ayaa maanta ku sharfay seddex ciyaaryahan oo halyeeyo ah, iyagoo soo bandhigay seddex qaab oo ka baxsan garoonka Emirates Stadium.
Tareenka Thierry Henry waxaa lagu sawiray naxaas. Tani waxaa laga sameeyey dabaaldegyada sannadlaha ah ee Arsenal ee 125.
Thierry Henry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha -LifeBogger Qiimeynta
Florian Thauvin Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Steven Nzonzi Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Franck Ribery Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha